Shiinaha Cad-cad-xoqidda Sandy Disc-B322 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Xieyanshi
Shayga: Waraaqda saxanka ku duub Magaca sumadda: XYS
Qaab No.: B322 Xadka Grit: P60-p1000
Nooca: Wareegga Wareegga ama Xajmiga Roll: 5 "6" (dhexroor)
Taageero: jillaab iyo loop / godadka PSA H 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Isticmaal: birta iyo midabka alwaax: cad
Magaca kale: Materical: Aluminium Oxide hs code: 6805200000
Codsiga: Gawaarida Gawaarida Aerospace ee Birta
Shayga Saxan warqad sanding ah
Magaca sumadda XYS
Qaabka Lambar B322
Kala duwanaanta P60-p1000
Nooca Wareeg wareeg ah ama duub
Cabir 5 "6" (dhexroor)
Taageero jillaab iyo loop / PSA
Godad 0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
Isticmaalka nadiifinta birta iyo qoryaha
Materical Oxid Aluminium
Hs lambar 6805200000
Codsiga Gawaarida Mashiinka Aerospace ee Aaladda Gawaarida
Birta sida aluminium, birta kaarboon; alwaaxda sida jilicsan ama adag ... B322 disc sanding way ku shaqeyn kartaa sander waxoogaa shaqo dhammeyn ah, sida udiyaarin / dayactir, orbital sanding, prepping metal ka hor rinjiga.
B322 wuxuu la qabsadaa tayo sare leh macdanta aluminium, taas oo waari karta, iyo sidoo kale hubinta jarista degdegga ah.
Dahaadhku waa dhismo jaakad furan, maaddaama oo ay jiraan meelo u dhexeeya miraha wax xoqaya, kana fogaanaya carrada oo is hortaagta, taas oo kordhin karta nolosha abraska si weyn.
B322 disc sanding waa mid aad u fudud in la isticmaalo laguna dhejiyo sanders, sanding block, iwm.
Cajaladahayaga sanding-ga ah ayaa lagu siinayaa waraaqda ciraaq ee aad u baahan tahay. Waxaad heli doontaa 60 wadar xirmooyin sander ah oo wareega ah oo ah 6 fasallo kala duwan oo ay ku jiraan 40/60/80/120/180 / 320Grit. Markay tiradu sarreyso, ayaa sifiican ufiican
STR DHISMADA TAYO SARE
Suufyadayada alwaaxa waxaa laga sameeyaa aluminium tayo sare leh oo la xoqin karo, taas oo ah mid waarta oo ka hortagaysa. Hadhuudhka aluminium ee aluminiumku wuxuu bixiyaa goyn dhakhso ah iyo dhammaystir wanaagsan mashruucaaga
PREMIUM KU SOO LAAB 8 8 HAL
Xilliga nasashada waxay ka dhigeysaa ka saarista qallafsan iyo beddelideedu mid deg deg ah waxayna dheereyneysaa nolosha saxan kasta, 8 god ayaa loogu talagalay soo saarista boodhka waxtarka leh
COM ISKU DUWANTA UNIVERSAL
Qalabkayaga 5 inch (125mm) ee sanding-ka ayaa ku habboon sander caalami ah, sida BLACK + DECKER, DEWALT, Bosch, Makita, PORTER-CABLE, iwm.
AP CODSIYADA BADAN
Cajalladahaaga cusub ee lagu dhejiyo calaamadaha ayaa ku habboon in lagu shiido oo lagu dhammeeyo birta iyo birta, qoryaha, caagga, maqaarka, caagga, dhagaxa, dhalooyinka iyo waxyaabaha kale
Hore: Qalabka Waraaqda Filimka Cagaaran ee Caagga ah Waraaqda Saxanka -L911
Xiga: Sanding Disc Holes Gold Sanding warqad loogu talagalay Nadiifinta Baabuurka iyo Birta -720T